Kuvhiya Pendant Vagadziri & Vatengesi - China Kuvhiya Pendant Fekitori
TS-Q-100 Ruviri Ruoko Mechnical Kuvhiya Endoscopic Pendant
TS-Q-100, inoreva ruviri ruoko michina endoscopic yekurapa pendant. Icho chimwe chezvinhu zvakakosha zvekuvhiya mune yazvino laparoscopic kuvhiya. Kwete chete izvo zvekurapa zvinogona kuiswa, asi zvakare simba uye gasi zvinogona kupihwa. Ruoko rwakachinjika kaviri, kureba kweruoko kunogona kuvezwa uye kunogona kutenderedzwa nemadhigirii mazana matatu nemashanu, zvichipa nzvimbo yakawanda yekufamba.
TS-100 Double Arm Mechanical Operation Pendant muChina
TS-100, iyi modhi inoreva kune yakapetwa ruoko ruoko mechigadzirwa pendant.
Dhizaini-ruoko dhizaini inowedzera iyo yekuita nzvimbo yeiyo yekurapa pendant.
Kureba kweruoko rwakatenderera kunogona kugadzirwa.
Ose ari maviri bhokisi muviri uye ruoko rwemuviri runogona kutenderera mukati memakumi matatu emadhigirii.
TD-Q-100 Imwe-Ruoko Chinyorwa Chokurapa Endoscopic Pendant yeChipatara
TD-Q-100 inoreva kune imwechete-ruoko mechigadzirwa endoscopic yekurapa pendant.
Iine compact dhizaini uye isina nzvimbo nzvimbo hunhu, inzvimbo yakanaka yekuchengetedza vanachiremba kuzvipatara zvidiki uye zvipatara zvekuchengetedza zvakanyanya zvakaganhurirwa nenzvimbo yewadhi.
Inogona kupa hutachiona hwemagetsi, hutachiwana hwegesi uye data rekufambisa, uye isa zvekurapa.
TD-100 Imwe-Yemaoko Mechiniki Yekurapa Ceiling Pendant yeChipatara
TD-100, iyi modhi inoreva kune imwechete-ruoko mechigadzirwa chekuvhiya pendant.
Iyo yakajairwa kumisikidzwa kwenzvimbo dzegesi ndeye 2x O2, 2x VAC, lx AIR.